Esi na Nursery Catfish - Cultivation Cfish Culture • Yurie BSF
Kedu ka esi na-azụ ụmụ ahụhụ na - azụlite azụ
Yuria | Dec 26, 2018 | Otu esi eme ka azụ
Esi na-azụ nwa
Biko nyere aka na sayensị nke ajụjụ ma zaa banyere ịzụlite azụ
nke a dị na SHARE (òkè)
na mgbasa ozi ọha na eze dịka WA, FB, G +, Pinterest, LinkedIn Twitter wdg.
Echere na ọrụ ebere a nwere ike ịbụ ego anyị na njedebe oge. Aaamiinn
Ihe ị na-aga ebe a. Dezie ma ọ bụ wepu ihe odide ederede a ma ọ bụ na ntọala ọdịnaya Modul. Ị nwekwara ike ịme akụkụ ọ bụla nke ọdịnaya a na ntọala Ntọala a ma tinyekwa CSS omenala na ederede a na nhazi usoro di elu.
Enwere ike ịnwe n'enweghị nkwado?
Maka ikpo mmiri ọdọ mmiri na-enweghị ụda, ọ nwere ike ịbụ, mana enwere ike ibu ibu akwa obere azụ adịghị ngwa ngwa.
Ọnụ ọgụgụ ndị a na-akụ azụ na ọdọ mmiri apụghịkwa ịba ụba.
Ọ bụrụ na ọtụtụ mkpụrụ osisi ahụ agaghị adị na oxygen ma nwee ike ịkpata ọnwụ.
Ekwesiri ighota na ebumnuche nke aeration na ọdọ mmiri na-eme ka ọnụọgụ oxygen dị na ọdọ mmiri ahụ, ka anyị wee nwee ike ịba ụba mkpụrụ osisi catfish dị na ọdọ mmiri ahụ.
Kedu ka esi emeso ọdọ mmiri ntancha nke bụ ọtụtụ akpa?
Site n'inye aka n'elu oke ọdọ mmiri. Nke a dị ka oghere anyanwụ na-abanye n'ime ọdọ mmiri ahụ. Nke mere ka enwere ike belata uto nke akpa.
Na-eme ka akpa na-ehicha ya na nwa na-agba ọsọ.
Dịkwa mkpa ma ọ dịkarịa ala otu ugboro n'izu nyere nnu, PK ma ọ bụ metalin blu. Nanị obere akụkụ nke usoro ihe dị mkpa.
Na-echekwa ihe siri ike
Ngwurugwu na-echekwa ihe dị oke mita n'ogologo?
N'ihi na a na-agbakọọ ọnụ mmiri na-agbazi kwa izu mita site n'ịba ụba ọdọ mmiri PxLxT.
Dịka ọmụmaatụ, ọdọ mmiri na-eji 280cm x 300cm x 25cm na mmiri nke 10 - 15cm na mmiri na-agba mmiri, ọdọ mmiri ahụ nwere ike ịnweta 50.000 seedlings ruo mgbe ọ ga-adịwanye nke 2 - 3.
Kedu ihe njiri siri ike maka nha 600cmx200x65cm?
Ịmalite ịmụta n'oge nwere ike ịbụ n'etiti 500 - 1.000 ọdụ.
Ogologo oge ole ka a ga-enye mkpuru ahịhịa ma ọ bụrụ na a ga-enwe ntụ ntụ ma ọ bụ fengli?
A pụrụ ịkụnye mkpuru osisi na-amalite mgbe ọ dị ụbọchị anọ na-ere ntụ ọka ma ọ bụ naanị obere.
Ebumnuche nke ịnye nri pellets na nsị nke larvae iji mee ka ike nke carbohydrates dịkwuo ike ka oke okwute dịkwuo ike na ike
Ma, a ghaghị inye ya ikpuru silk dị ka onyinye nke protein, n'ihi na ndị nwere ike ịnweta ikpuru silk nwere ike dochie ya. maggot onyinye.
Ejiri maggot ma ọ bụ ikpuru ma ọ bụ larvae si nwa mgba ma ọ bụ nwa agha ojii.
Usoro dị mfe, dị ka ịmepụta pasta na ikpuru anụ silk.
Nke ahụ bụ isi ihe onwunwe dị n'ụdị ikpuru ikpuru jikọtara ya na ihe ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ ihe na-edozi ahụ.
Tupu ị na-eji ya, debe ya na friji maka awa 24 ka usoro ịgba ume na-eme ka ihe na-edozi ahụ dịkwuo mma.
Maka njikọ zuru oke, ị nwere ike ịhụ ebe nrụọrụ weebụ www.YurieBSF.com
Kedu ka ọtụtụ grams nke pellets ntụ ntụ ma ọ bụ fengli ga-esi nye nri larvae?
A na-enye plọts pengli dị ka otu gram. Usoro nlekọta nwere ike ịgbasa ozugbo na larvae.
Kedu ka ị na-esi azụ azụ azụ, ọ dị mkpa ka ị gaa na bibis mbụ?
Nri kwesiri iburu 'nkpuru', nke bu nke mere ka ihe oriri ahu gbasaa n'aputa azua, nke mere na azụ juru oke ma zere igbochi.
Olee otú ịzụlite dị ka ndị a:
Na-agba mmiri obere ntakịrị n'ime nri, jide n'aka na ị gaghị akwa.
Nwuo ruo mgbe agwakọtara gị.
Mee ka nri a na-eri bie maka 15 - 30 nkeji ruo mgbe echere nri mgbe ọ na-eche chewy ma ọ bụ dị nro.
Ọzọkwa, a na-akwadebe larvae larfish na-echekwa.
Gbasaa ndepụta evenly. A na-etinye ego ole na ole.
Nye ya ruo mgbe oke ogwu juru, Kwụsị ma ọ bụrụ na larvae amalite ịpụta na ị gaghị achọ ịnụ nri ọzọ.
Jide n'aka na enweghi otutu nri nke larvae na-eri. Ekwela ka ọtụtụ ihe edozi na ala nke ọdọ mmiri nke ga-abụ amonia ma ọ bụ nsi maka mkpuru osisi.
Kedu ka ị si enye ezigbo irighiri silik?
Maka nsonaazụ kachasị elu, inye silkworms ga-eso usoro ndị a:
Nzọụkwụ mbụ, ikpuru anụ silk na-ekpuchi mbụ, nke mere na etu ejirila ma ọ dịkarịa ala otu ma ọ bụ ụbọchị abụọ.
Ọzọ, tupu a saa gị, hichaa mmiri ahụ ruo mgbe ọ dị ọcha.
Jide n'aka na enweghi ozu ndi ozo na idozi ikpuru silk na ala nke ọdọ mmiri nke na-eme ka mmiri nwee ike ibelata.
Ugboro ole ka nri n'oge oge ezo?
Mgbe oge mmiri ozuzo na-eri nri jide n'aka mgbe mmiri ozuzo kwụsịrị otu ma ọ bụ awa abụọ, ka e wee ghara ịkụkọ nri na mmiri ozuzo.
Ọ bụrụ na oké mmiri ozuzo ahụ dị ogologo, nri na-ezuru ugboro abụọ kwa ụbọchị, nke a bụ inye oge nri ka e rie ya ma ọ bụrụ na a na-eri ya.
Zere inye nri mgbe mmiri ozuzo ma ọ bụ na-esote mmiri ozuzo, azụ na-eri nri mgbe mmiri ozuzo nwere ike ịda n'ihe ize ndụ nke ọrịa.
Ebe ọ bụ na ihe oriri a na-eri ga-agbọghachi ma mee ọdọ mmiri brownish muddy.
Ihe ọjọọ ọzọ bụ na ọnọdụ ndị dị ka fungi ga-amụba ma mee ka e nwee ihe mgbu.
Kedu ihe kacha mma mgbe ị wepụsịrị akpa?
Nye zegli zero.
Usoro a na-fesa ntakịrị ntakịrị.
A na-emezi nlekọta nke okpu n'ihe dika otu gram.
Ma ọ bụ ihe kasị mma nye maggot pasta.
Mgbe enwere ike ịkụ mkpụrụ nwere ike inye pens. Ma ọ bụ iji chekwaa ụgwọ ọrụ maggot pellets nnukwu protein.
E wezụga inwe ihe oriri zuru oke na protein dị elu, ego ị na-erepụta akwụkwọ nri dị oke ọnụ, naanị gburugburu 3.000 / kg.
Nke a bụ ihe nzuzo nke nnukwu uru nsị, nke bụ ọnụ ala ma dị oke nri na-edozi nri.
Kedu ndepụta oriri ọzọ a na-enye iji mee ngwa ngwa?
Maggot BSF, snails, snails wdg.
Maka ụzọ dị mfe ma dịkwa oke ala iji mee onwe ya ọnụ, otu esi emeghe ya na Google, www.YurieBSF.com
Kedu ka ị ga - esi gbochie 1 - 2 mkpụrụ osisi na - agbasa mkpụrụ na - acha ọcha?
Ihe kpatara ọrịa nchara ọcha bụ na ọdọ mmiri ahụ na-ekpuchi ìhè anyanwụ na mmiri dị oke oke.
Àgwà mbụ ahụ bụ mmiri mmiri mmiri na-acha ọbara ọbara ma na-acha ọcha ntụpọ, ya bụ mushrooms.
Iji zere nsogbu a, n'elu ọdọ mmiri ka a na-enye ụlọ, ma ọ bụ na ọ ga-abụ site na ịnye ohia nke na-arụ ọrụ dịka ụlọ.
Kedu ihe kpatara nsogbu ahụ na-esote ngwugwu a?
Ihe na-esote ngọngọ bụ n'ihi mmetụta ọjọọ nke nri fọdụrụ na-aghọ amonia.
Tụkwasị na nke ahụ, ọ na-ebutekwa site na nnukwu nnukwu imi na ala nke ọdọ mmiri ahụ.
Ihe ngwọta bụ ịhazi ọnụọgụ nri nke mere na ọ bụghị ihe dị ukwuu anaghị eri ma bụrụ ebe na-egbu egbu maka larvae.
Mechaa ọdọ mmiri ahụ mgbe nile site n'inye mgbasa mmiri iji wepụ amonia.
Kedu ihe mere isi nsị ji nwee isi?
Otu ihe kpatara ya bụ n'ihi na mmiri dị oke njọ.
Iji merie nke a, dochie mmiri, ma gbakwunye akụkọ probiotics.
Ngwurugwu ma ọ bụrụ na a ga-enye mpe mpempe akwukwo pọọpọ.
Ma ọ bụ jiri probiotics si na Noni akwukwo wepụ.
I nwere ike ibudata nkuzi na weebụsaịtị www.YurieBSF.com
Gịnị na-akpata azụ ka ọ na-efe n'elu mmiri?
Ihe kpatara azụ azụ nwere ike ịbụ n'ihi na e nyere ọtụtụ n'ime nri, ma ọ bụ n'ihi ihu igwe oyi.
Kedu otu esi eji azụ azụ azụ?
Nzọụkwụ mbụ bụ inye blu ọkụ, mgbe ahụ, awa atọ jiri dochie mmiri dị ka 50%.
Nzọụkwụ nke abụọ, jide n'aka na ndepụta ndị ọzọ ga-ebelata, na akpa akpa tupu enye ya azụ.
Maka ndị gị nke na-etinye ọdọ mmiri n'okpuru ụlọ mpempe ụlọ ahụ.
Jide n'aka na mmiri ozuzo nke dara site na taịl ahụ adịghị adaba na ọdọ mmiri ozugbo, n'ihi na moss nwa si na tile nwere nsị.
Kedu ihe na-eme ka ntụpọ ọbara ọbara n'ime afọ dị nso na patil?
Isi ihe kpatara ọrịa ahụ bụ ihe oriri nke oke nri.
Nri buru ibu ga eme ka otutu ndi ozo biri na ala nke ọdọ mmiri nke ejikoro ya na oke azu na ibu osisi nke oria.
Ihe ngwọta bụ iji merie ọwa mmiri nke ọdọ mmiri. Debe nri nke anaghị agbasasị ma ọ bụ gbasaa.
Ezi ọ bụghị itinye curcuma?
Ọ dị mma, na-agbakwunye ngwa nri n'ụdị ginger ma ọ bụ ginger ma ọ bụ garlic ma ọ bụ betel epupụta nke a na-esi sie ike na-enyere aka n'ịba ume azụ.
Nkpuru ahihia ndia di kwa nma dika ihe ndi ozo.
Kedu ka ị si emeso azụ azụ?
Lee ụzọ ụfọdụ ị ga - esi merie azụ azụ:
Gbanye mmiri mmiri ọdọ mmiri.
Push 3-5 na-acha ọcha na ala ma na-efesa na ọdọ mmiri
Gwunye nnu azụ n'ime ọdọ mmiri.
Wụnye ọgwụ na-acha anụnụ anụnụ n'ime ọdọ mmiri.
usoro a dị n'elu bụ ihe ngwọta iji merie ihe ndị na-akụ azụ, mmiri na-esi ísì ọjọọ ma ọ bụ na-esi ísì ụtọ.
Ogologo ụbọchị ole ka a gbasịrị mkpụrụ osisi mkpuru osisi?
Mee ụdị mbụ mgbe 15 gasịrị.
Ma, ihe a na-ewere bụ bendolan ma ọ bụ dị nnọọ mkpa.
Ụbọchị ise mgbe e mesịrị, mee nhazi zuru ezu.
Ejila afọ iri na ụma nke 15 dozie otu ụbọchị, nke a nwere ike ịnọ n'ihe ize ndụ maka ọnwụ azụ.
Kedu ka mmiri dị mma maka ọkpụkpụ na-egbuke egbuke dị elu?
Ogo mmiri agaghị agafe 20cm.
Ụcha nke mmiri acha ọbara ọbara ọ dị mma maka nchara?
Ọ bụrụhaala na azụ azụ nkịtị abụghị nsogbu.
Ọ bụrụ na ihe merenụ ka mma, emeso ọgwụgwọ ahụ na probiotics oge niile.
Kedu ka ị si eme ka mkpụrụ osisi 3-4 ghara ịnwụ ngwa ngwa?
Ị na-eme nke a site na ijide n'aka na ọdọ mmiri ahụ na-ekpughere n'anyanwụ, ma kpochapụ ¼ nke ọdọ mmiri site na banana.
Ọ bụrụ na steeti ọdọ mmiri na-enweghị ụlọ ma mee ọdọ mmiri kpughere ìhè anyanwụ ụbọchị niile, mezie mgbanwe mmiri dị ka 30 - 50%.
Kedu ka osisi ga esi eto eto?
Ụzọ kachasị mfe bụ inye mkpụrụ osisi na-edozi ahụ, nri zuru ezu na protein dị elu.
Ma ọ bụrụ na ịzụta ndepụta na njirisi ndị a na ụlọ ahịa ahụ, ị ​​gaghị enwe ike iri nri.
Ya mere, ihe ọzọ ga-abụ ịme nri gị nke dabara na mkpa nke larvae larfish na ọnụ ala dị ọnụ ala.
Ọ bụ n'ụdị ikpuru ma ọ bụ maggot ma ọ bụ larvae nwa agha ojii.
Usoro a bụ mgbe oke azụ bụ ụbọchị anọ, a na-egbutu ikpuru ma ọ bụ kwadoro ma nye ya larvae.
Nye ya nke ọma ka azụ niile dị azụ nweta òkè ha.
Welie kakaban ka oke nri nri ghara igbochi ma dozie ya.
Ugboro ole ka ị ga-eji dochie mmiri?
Mgbanwe nke mmiri kwesịrị ịdabere na ọnọdụ mmiri. N'ihi na mpaghara ọ bụla nwere ọkwa dị iche iche nke mmiri.
A ghaghị dochie anya mmiri ahụ ozugbo mmiri ọdọ mmiri amalitela ịmalite ikpochapụ.
Ma ọ bụ mgbe azụ malitere ịtụgharị uche n'enweghị ihe ọ bụla.
Mgbanwe nke mmiri anaghị adị n'otu oge, mana ọkara ọkara kachasị elu ma mee ọzọ n'echi ya ruo mgbe azụ ga-eleghachi azụ anya.
Kedu ka ị na esi emeso catfish, bụ ndị na-eto eto?
Ọtụtụ ihe na-akpata uto nke eriri kuntet, n'ozuzu n'ihi na usoro ịzụrụ nri adịghị mma na àgwà nri a na-enyekwa yana nke kachasị mma.
Nsogbu nke oke ego na-efu n'ọtụtụ mpaghara.
Ya mere, ndị oru ugbo a na-eri nri ga-abụ ihe okike n'inweta nri ha.
Otu ngwọta bụ ịmepụta ndepụta ọzọ site na maggot.
A ga-enyocha nkọwa gbasara otu esi eme ndepụta ndị ọzọ site na maggot na weebụsaịtị BSF yurie.
Na google ụdị yurie bsf ma ọ bụ pịnye www.yuriebsf.com
Kedu ka esi eme ọdọ mmiri mmiri ndụ?
O di nma na obughi agba nke mmiri na-acha odo odo nke a choro, ma enwere otutu umu anumanu di ndu n'ime mmiri ozo.
N'ihi na ọnụnọ nke obere ụmụ anụmanụ na-egosi na mmiri dị mma ka anyị gbasaa mkpụrụ.
Obere umu anumanu di iche iche nke anumanu, zoo plankton na ndi ozo di iche iche dika mmiri di mma iji gbasaa azu dika nri ndi ozo.
Nke a bụ otu ụzọ isi mee mmiri ọdọ mmiri ngwa ngwa:
Ntinye mmiri dị ọcha, Mmiri dị ọcha nwere ike isi na mmiri ma ọ bụ mmiri ala.
Ọ bụrụ na enweghi mmiri dị mma ma chọọ iji mmiri nke a na-enweta site na mmiri a na-emeghị ka ọ bụrụ mmiri, a ghaghị itinye ya maka ọ dịkarịa ala ụbọchị atọ, nke mere na ígwè na ihe ndị na-adịghị mma ga-abanye na ala nke akpa ahụ.
Nzọụkwụ ọzọ na-eme ka ị na-eme nri site n'ịtinye otu nsị nke fatịlaịza ma hapụ ya maka otu izu ma ọ bụ abụọ.
Ọchịchị probiotic dịkwa mma ma na-enyere aka mee ka mmiri ọdọ mmiri na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Mgbe otu izu maọbụ izu abụọ gasịrị, mmiri ga-agbanwe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ọtụtụ nsị anwụnta na ụmụ anụmanụ ndị ọzọ.
Kedu otu esi esi edozi ọdọ mmiri?
Otu n'ime ihe ndị kpatara mmiri ọdọ mmiri bụ na nsị azụ na ọdọ mmiri dị elu.
Ọ bụrụ na nke a emee, mee ya site n'ịwapụ ma ọ bụ kewaa azụ n'ime ọdọ mmiri dị iche iche.
Ntak emi ẹsuade mme enyịn̄, edi ediwak owo ẹwot?
Ọnụ ọgụgụ nke ndị nwụrụ anwụ nwere ike ịbụ n'ihi na àgwà nne adịghị njikere.
Ya mere, jide n'aka na nchekwa brood studfish kwesịrị ịdị njikere.
Jide n'aka na a ghaghị inye nlekọta nke broodstock na-enye nri dị elu na protein na ihe oriri na-edozi ahụ na nlezianya pụrụ iche tupu a mụọ ya
Kedu ka i si eme ngwa ngwa ngwa ngwa?
Nye nri dị oke mma dika BSF maggot.
Na-enye mkpụrụ ahụ tupu ịnye ma nye ginger ma ọ bụ akwụkwọ pọọpọ site na ịcha n'ime obere iberibe dịka probiotics maka ọdịda.
Lelee ebe 99 maka ndi ozo ndi ozo!
Kpọtụrụ Yurie BSF
Nkuzi nke BSF Media Maggot Bran
Kedu ihe kachasị ọhụrụ 2019 BSF Maggot Livestock
Otu esi eme ka ugbo ohia riz Bran / Rice bran maka Catfish Feed